တစ်သက်မှာတစ်ခါလောက်မြင်သွားသင့်တဲ့ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ် ဓာတ်ပုံများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingတစ်သက်မှာတစ်ခါလောက်မြင်သွားသင့်တဲ့ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ် ဓာတ်ပုံများ
November 15, 2021 Wai Phyo Oo Amazing 0
လောကမှာတစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့််မျက်လုံးနဲ့ တပ်အပ်မြင်တာတောင်ယုံကြည်လက်ခံဖို့ခက်ခဲတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေများစွာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေထဲက တစ်ချို့ကိုဖော်ပြရမယ် ဆိုရင်တော့ …… shwekhitonlinetv.com
၁။ ငှက်အကြောင်းဖတ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စာအုပ်ပေါ်ကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ထူးခြားတိုက်ဆိုင်စွာပဲ တစ်ကယ့်အပြင်မှာ စာအုပ်ထဲက ငှက်ကလေးက လာနားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၂။ ဒီပုံကတော့ လအပေါ်မှာ လှပစွာနဲ့ သက်တံကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ ဒီမြင်ကွင်းက တစ်ကယ့်ကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှပြီး ဒီလိုဖြစ်စဥ်မျိုးကို တစ်သက်မှာတစ်ခါမြင်တွေ့ရဖို့တောင်မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေကတော့ ဒါဟာ တစ်ကယ့်ပုံအစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ ဒီခွေးကလေးတွေကတော့ သူ့တို့ကိုယ်ပေါ်မှာ အမဲကွက်ကလေးတွေနဲ့ အမှတ်စဥ်မှတ်ထားသလိုပါပဲ။ နေတော့လည်း အစဥ်အတိုင်းလေး နေနေတယ်လေ။ shwekhitonlinetv.com
၄။ ဒီကားပိုင်ရှင်လောက် ကံကောင်းတဲ့သူမျိုး သင့်ဘဝမှာ မြင်တွေ့ဖူးမယ်လို့ ထင်ပါသလား။ သစ်ပင်ကလည်းအတော်လေးကို သည်းထိတိရင်ဖိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ အနေအထားနဲ့ကို ပြိုလဲကျနေတာပါ။ shwekhitonlinetv.com
၅။ ဒီရှုခင်းနဲ့ ဒီကားရဲ့ကိုယ်ထည်က ပန်းချီက အဲ့လောက်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တူနေတာက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ နောက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူကလည်း လုံးဝကို ကွက်တိကျကျရိုက်ထားတာနော်။ တစ်ကယ့်ကို ယုံချင်စရာမကောင်းတဲ့ ပုံတစ်ပုံပါပဲ။ shwekhitonlinetv.com
၆။ အပေါ်ကအရာကတော့ တစ်ကယ့်သက်ရှိ ပုစဥ်းတစ်ကောင်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ကတစ်ခုကရော ? ပုစဥ်းပုံစံတက်တူးထိုးထားတာလား ? အပေါ်က ပုစဥ်းရဲ့ အရိပ်လား ? မြင်ရသူတွေအဖို့ အတော်လေးကို ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားမယ့်ပုံပါပဲ။ shwekhitonlinetv.com
၇။ ဒီလူ မီးမှုတ်လိုက်တဲမီးတောက်က ထူးထူးဆန်းဆန်း နဂါးတစ်ကောင်ပုံစံ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒါက ပြုပြင်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံလား ဆိုတာတော့ ​စဥ်းစားစရာပါပဲ။ shwekhitonlinetv.com
၈။ မိုးကြိုးပစ်တာကို အမိအရ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူဖို့ဆိုတာ အတော်လေးကို ခက်ခဲတဲအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးကတော့ လှေဆိပ်က “Perfect Timimg” (ချိန်သားကိုက်ခြင်း) လို့အမည်ရတဲ့ လှေတစ်စင်းရဲ့နားမှာနှစ်များစွာစောင့်ဆိုင်းပြီး မိုးကြိုးပစ်တဲ့ပုံကို ချိန်သားကိုက်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၉။ ဒီကားနှစ်စီးကတော့ တမင်တကာ တိုင်ပင်ပြီး ဘေးချင်းယှဥ်မောင်းခဲ့သလားတော့မပြောတက်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ နှစ်စီးရဲ့နောက်ကျောက စာနှစ်ခုက အဲ့ဒီလိုမောင်းမှပဲ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်စေမှာလေ။ ကြည့်ပါဦး ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်မလေး “Taylor Swift” ဆိုတဲ့နာမည်ကို ကွက်တိကျနေအောင် ဖန်တီးထားသလိုပါပဲ။ shwekhitonlinetv.com
၁၀။ သင့်ဘဝမှာ နေရာတစ်နေရာတည်း သက်တံ (၈) ခုဖြစ်ပေါ်နေတာကို မြင်ဖူးပါသလား။ မမြင်ဖူးရင်တော့ ဒီပုံလေးကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒါက ပြုပြင်ထားတာမဟုတ်တဲ့ တစ်ကယ့်ပုံအစစ်ပါ။ shwekhitonlinetv.com